गोरखपुर का”ण्ड:रुदै छुटिने निर्णय गरे। महिलाले भनिन् म छाड्न सक्दिन बरु जे’ल जा’न तयार छु!:: Mero Desh
गोरखपुर का”ण्ड:रुदै छुटिने निर्णय गरे। महिलाले भनिन् म छाड्न सक्दिन बरु जे’ल जा’न तयार छु!
Published on: १ बैशाख २०७८, बुधबार ११:०४
गोरखपुर भिडियो समचारको अन्तिममा राखिएको छ आज भोलि सबै युवा अझ बिवाहित श्रीमान श्रीमतीको प्रीय पात्र र अहिले पछिल्लो समयका एकदमै चर्चीत पत्रकार, युटुबर, तथा समाजसेवी सन्तोश देउजाले दोश्रो सफलता पाएका छन। उनले दिपक तिवारि र उनले भगा -एको।
महिला सहित गोरखापुरको कुनै हाेट’लबाट फेला पारे का छन। दुबै जना एक साथ फेला परेक हुन।दिपक र हा’लको भगाएका महिला दुबै बिवा -हित हुन।“दिपक भारत बाट नेपाल आउने भनेर आफ्नो घरसम्म खबर गरेता पनि सोही दिन बाट सोही महिला लिएर भागे को थिए। श्रीमतीले श्रीमान आउने।
आसमा सबै खान तयार गरे पनि श्रीमान ५ दिन सम्म नफर्कीए पछी परिवार छ’क्क पर्‍यो। पछी श्रीमा”नले अन्य सग घर सुरु ग”रेको थाहा पाय। गोरखपुर हुदा उक्त महिलाले भने धेरै अन्य न’सालु पदा’र्थ से’वन गरेको बुज्न गएकाे छ ।जब उनिहरु फेला परे तब भने दुबै जना खुबै रोए।
सन्तोष देउजाले धेरै चलाखी र चाणक्य नीति लगाएर फेला”पार्न सफल पनि भए र अब दुबै लाई नेपालमा आफ्नो परिवार काे जिम्मा लगाउने उनको भनाई छ । उनले भने यो मेरो लागि राम्रो सफलता हो भने अन्यको लागि उदा”हरण ।अब बाँकी भिडियोमा:यो पनि,,हरिद्वार पुगेर पूर्वराजाले भन्नुभयो
हाम्रो धर्ममाथि बा’ह्य अति’क्रम’ण बढ्यो, सबै मिलेर बचाउँ “काठमाडौँ: पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले हिन्दु धर्ममाथि बाह्य दबाब, प्रभा व, प्रलोभन र अतिक्रमण बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।भारतको हरिद्वारमा सुरु कुम्भ मेलामा पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहले सम्बोधन गर्दै।
हिन्दु धर्मको सभ्यता र संस्कृ तिका अनेक आदर्शले विश्वकै मानवीय आदर्शलाई डोर्‍या उने प्रतिक्रिया दिए ।
“पत्नी कोमल शाहसँगै कुम्भ मेलामा सहभागी भएका ज्ञानेन्द्र शाहले महामण्डेश्वर कैलाशानन्द गिरीले पूर्वराज दम्पतीलाई स्वागत र आशिर्वाद दिएको अवसरमा यस्तो बताएका हुन् सम्बोधन को क्रममा ज्ञानेन्द्र शाहले भनेका छन्
‘हाम्रो हिन्दु सभ्यता,हाम्रो हिन्दुत्व र हाम्रो सनातनिक आर्य संस्कृति, अनि हाम्रा वेद उपनिषद्, पुराण आदि अनेकौँ ग्रन्थ शास्त्र सबै सबै नै महत्वपूर्ण छन्- तिनको मननीय स्थान, हाम्रा विधि व्यव हार, जीवन पद्धति, आचरण र अनुशीलन आफैँमा गहन छन्
“नेपाल र भारतका कैयन देवस्थलहरु, धामहरु एवम् अनेकौँ स्थानहरु यस्ता छन् जसले सदैव- सर्वे भवन्तु सुखिनको विश्वव्यापी मान्यता राख्दछन्।’‘बाह्य द’बाब, प्रभाव, प्रलोभन र सांस्कृतिक अ”तिक्रमण का का’रण केही समयदेखि पूर्वीय दर्शन, धर्म र सनातनीय संस्कारमा ह्रास आएकोमा ज्ञानेन्द्र शाहले चिन्ता व्यक्त गरे का थिए ।
“अब हामीले हाम्रो धर्म बचाउनू छ, हाम्रो संस्कृतिको रक्षा गर्नू छ, हाम्रा मठ मन्दिर, देवस्थल र धामहरूको विकास गर्नू छ । हाम्रा गंगा नद नदिहरूको प्रवाह स्वच्छ पार्नूछ । भगवान रामले भन्नूभएको थियो “अपि स्वर्ण मणि लंका न मे लक्ष्मण रोचति जननी जन्म भुमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” भन्ने सद्यूक्तिको ख्याल हामीले राख्नै पर्दछ’।
शाहले भनेका छन् ।शाहले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ‘यी नै प्रयोजन हेतू यो महाकूम्भ मेलाको यो विशाल भेलाको र यहां उपस्थित सबै विद्वान, विदूषि, सन्त महात्माहरूको ध्यान पूगोस् । यही अवधारणा छ मेरो । फेरि पनि सबैमा साधूवाद । धन्यवाद !